Shiinaha Baako qaybta Baako, Qeyb Baako
DPH Roller Series Nooca Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Mashiinka Xirmooyinka
DPH Roller Type High Speed ​​blister xirxirida mashiinka waxqabadka horumarsan, howl fudud, soosaarka sare waa qalabkii ugu dambeeyay ee shirkadeena la hagaajiyay. Waa qalabka ugu wanaagsan ee wax lagu rakibo ee loogu talagalay warshadda dawooyinka waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah, warshadda daryeelka caafimaadka iyo warshadaha cuntada. Aad ayey uga dhakhso badan tahay ugana wax soo saar badan tahay nooca flat flat machine-ka wax lagu duubo. Ma qaadaneyso wax qashin qashin ah oo feer ah, waxay keydin kartaa in ka badan $ 50,000 / sanadkii qalabka.
Mashiinka wax lagu duubo ee DPP-260 Automatic Flat blister
Mashiinka wax lagu duubo ee DPP-260 Automatic blister waa qalabkeena horumarsan ee loogu talagalay hoos u cusboonaysiinta. Wuxuu korsadaa tiknoolajiyada isku dhafan ee adeegsanaya soo noqnoqda rogista xakamaynta xawaaraha iyo farsamada, korantada, iftiinka iyo hawada mashiinka. Naqshadeedu waxay si adag ugu hoggaansamaysaa heerka GMP waxayna hoggaanka u haysaa baakadka baakadda la xareeyay. Soo bandhigida hawlo horumarsan, hawlgal fudud, wax soo saar sare, iyo mashiinku waa qalab xirxirineed oo habboon oo loogu talagalay shirkadaha dawooyinka waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah, cuntada caafimaadka iyo warshad walxaha cuntada.
Qaabka SGP-200 Qalabka Tooska ah ee Tooska ah
SGP In-Line Capper wuxuu ku habboon yahay xoqidda noocyada kala duwan ee maraakiibta (nooca wareega, nooca fidsan, nooca laba jibbaaran) waxaana si ballaaran loogu adeegsadaa meelahaas sida dawooyinka, cuntooyinka, kiimikada, iwm.
Dhalada Xawaaraha Sare ee Unscrambler
Xawaaraha sare ee aan tooska loo saarin dhalada waa hal xubin oo ka mid ah khadkeena xirxirida dhalada balaastigga ah. Waxay leedahay xawaare sare, ku habboon mashiinka kale waxayna awood u leedahay inay siiso dhalo laba xariiq oo wax soo saar ah isla mar ahaantaana loo maro labo gawaari oo kala duwan.
Taxanaha SL Kaarka Kaabsoolka Elektaroonigga ah
Taxanaha SL Electronic Tablet / Capsule Counter wuxuu ku takhasusay tirinta wax soo saarka daawada, daryeelka caafimaadka, cuntada, kiimikada beeraha, injineernimada kiimikada iyo wixii la mid ah. Tusaale ahaan: kiniinno, kiniinno dahaadhan, kaabsul jilicsan / adag. Mashiinka waxaa loo isticmaali karaa kaligiis iyo sidoo kale mashiinada kale ee ay soo saarto shirkadeena si loo sameeyo khad soo saar dhameystiran.
Mashiinka Calaamadaha Sare ee ALT-B
BDTB-J waxay ku habboon tahay weelka fidsan ama afargeeslaha ah ee ballaaran sida sigaarka, bacda, kaararka & sanduuqa cadayga iwm Mashiinka waa mid dhaqaale oo fudud in la shaqeeyo, ku qalabaysan HMI saaxiibtinimo iyo nidaamka xakamaynta PLC. Waxqabadka ayaa xasilloon oo leh heer hoose gaar ahaan dusha sare ee weelka. Nidaamka beddelka fudud ee nidaamka ayaa ku saleysan shuruudaha.
Mashiinka Kartoonada otomaatiga ah ALZH
ALZH Taxanaha mashiinka kartoonka si otomaatig ah loo dajiyay nal, koronto, gaas, isdhexgalka mashiinka alaabada tiknoolajiyada sare. Lagu dabaqi karo kaabsulka, kiniiniyada nabarrada sameysmaya, baakadaha dibedda waa Alu-PVC khariidad, dhalo u eg, boomaato, iyo waxyaabaha la midka ah ee kartoonada otomaatiga ah.